१२ वर्ष सम्म सरकारको साक्षरता अभियान पुरा भएन | Edupatra
१२ वर्ष सम्म सरकारको साक्षरता अभियान पुरा भएन
भाद्र २४, २०७७ इडियु-पत्र संवाददाता
एक दशक अगाडिदेखि सरकारले साक्षर नेपाल बनाउने उद्घोष गर्दै आएको छ । यसका लागि अरवौं रकम खर्च गरिसकेको छ । तर सबै लगानी र एकदशक अगाडिदेखिको सरकारको प्रयास भने अहिले सम्म सफल हुुनसकेको छैन ।
राजधानी, सबैको ध्यानाकर्षण हुने, प्राज्ञिक तथा हजारौं शिक्षाविद् जन्माउन सफल, सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय तथा अधिकांश राजनीतिज्ञ उत्पादन गर्न सफल काठमाडौं जिल्ला समेत अहिलेसम्म पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन । प्रविधि र पहुँच दुवै पुग्न सक्ने ठाउँमा समेत आफ्नो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नसक्ने सरकारको कार्यक्रम दुरदराजमा कसरी कार्यन्वयन भइरहेको छ आफैमा प्रश्न चिन्ह उब्जाइरहेको छ ।
सरकारले यस वर्षको बजेट भाषणमा नेपालका २४ जिल्ला साक्षर हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भने पनि यो वर्र्ष सरकारलाई राम्रो वहाना जुरेको छ । कोरोना किनकि विगत एकदशकभन्दा अगाडिदेखि दुई वर्ष भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भन्दै आएपनि अहिलेसम्म देश साक्षर हुन सकेको छैन । यो वर्ष साक्षरता अभियान मात्र होइन सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण न्यून भएको अवस्थामा मात्र साक्षरता अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले बताउँदै आएको छ ।
करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य सहित नेपालमा साक्षरता अभियानमा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि सुरु भएको हो । अहिले सम्म देशका साक्षर मानिएका कति मानिस पुनः निरक्षर भइसके सो को अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निकाय नै नेपालमा छैन यसले पनि साक्षरता अभियान सफल हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले सम्म जम्मा ५३ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । अझै २४ जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् । सरकारी तथ्यांकमा साक्षर भनिएका जिल्लाका मानिस पनि सबै साक्षर नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६–०७७ अनुसार प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ९७.१ आधारभूत तहको ९३.४, माध्यमिक तहको ४७.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्ष भित्र विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भित्र प्रवेश गराएको उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय उमेर समूहकै करिब चार प्रतिशत बालबालिका निरक्षर छन् । कक्षा छाड्ने दरसमेत हेर्दा यो सङ्ख्या अझै बढ्दै गएको छ । फेरी, यो वर्ष कोरोना महाकारीका कारण करिब ८० लाख विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । प्रविधिको पहुँच र अभिभावकले समय दिन नसकेका बालबालिकाहरु सरकारले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा सहभागी भएकै छैनन् फलस्वरुप अक्षर चिनिसकेका बालबालिको पनि निरक्षर हुन खतरा बढेर गइरहेको छ ।
आन्तरिक खिचातानी र पयीय लोलुपताका कारण शिक्षा मन्त्रालयले सही निर्णय लिएर शैक्षिक सत्रका बार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसक्दा निरक्षरको संख्या बढ्नेमा दुईमत हुने कुरै छैन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विसं २०७६ मा सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा इच एन्ड टिच वान, समूह प्रणाली, परिवार साक्षरता र कक्षागत प्रणाली गरी चारवटा मोडलबाट साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो ।१२ वर्षअगाडिको सरकारको साक्षरता अभियान कहिले पुरा हुने ?
सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले निरक्षरको संख्या करिब एक लाख छ । दुई नम्बर प्रदेशमा यसको अवस्था चिन्ताजनक छ । प्रदेश २ का कुनै पनि जिल्लालाई अहिलेसम्म सरकारले साक्षर घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा प्रदेश एकको ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, बागमतीको काठमाडौं, कर्णाली प्रदेशका ५, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, डडेल्धुरा र बैतडी, गण्डकी प्रदेशका सबै र ५ नं. प्रदेशका केही जिल्ला साक्षर हुने पर्खामा नै छन् । यी जिल्लामा प्रभावकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन हुन नै बाँकी छ ।
पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय युवा साक्षरता (१५–२४ वर्ष) दर ९५ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रौढ साक्षरता (१५–६० वर्ष) दर ८२ प्रतिशत रहेको छ ।
महामारी, शिक्षा क्षेत्रका जिज्ञासा र समाधान